Jim Sterne Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Jim Sterne
Arbacada, Agoosto 12, 2015 Jim Sterne
Xogtu, sida biyaha, waxay ku timaadaa qaabab badan. Maskaxda bini'aadamka ayaa u soo baxday inay kala sifeyso inta badan xogta nagu soo socota sababtoo ah wax badan ayaa jira. Markaad indhahaaga iyo dhegahaaga furto, xogtu waa meel walba. Midabka darbiga, codka qaboojiyaha iyo urka qaxwada deriskaaga waxaa loola dhaqmaa sidii qoyaan. Biyuhu hawada ayey ku jiraan markasta laakiin faa iido ma leh
Ganacsiga (sida ku cad Wikipedia illaa Maarso 19 markay tahay 10:18 subaxnimo Waqtiga Baasifigga) waa: Dhaqan kasta oo gacan ka geysta iibinta alaabada macaamiisha tafaariiqda. Heerka tafaariiqda dukaanka, baayacmushtarku wuxuu loola jeedaa noocyada kala duwan ee alaabada la heli karo ee iibka ah iyo soo bandhigida alaabadaas si ay u kiciso xiisaha isla markaana u sasabto macaamiisha inay iibsadaan. Sheekadii ugu horaysay (apocryphal) ee baayacmushtarka iyo xogta waxay khusaysaa xafaayadaha la iska tuuro iyo